Ny sisan'ny voatabia sy dipoavatra dia mampitombo ny famokarana biogas | Fanavaozana maintso
Adriana | | biogaz, Toekarena an-trano
Ekipa mpahay siansa iray avy amin'ny Polytechnic University of Valencia no nandalina sy namakafaka ny fampiasana ny fako fambolena na vokatra azo avy amin'ny fahalalana ny fomba fitondran-tenany mamokatra biogas.
Ny valiny izay nofaranan'izy ireo dia ny dipoavatra dia afaka mampitombo ny famokarana biogas 44%, izay mpandevona izay tsy nampiasa afa-tsy slurry avy amin'ny kisoa.
Ny voatabia dia nampitombo ny famokarana gazy methane 41%, paiso 28% sy persimmon ihany no tsy nampiseho fahasamihafana.
Miaraka amin'ireo angona ireo dia azo apetraka ny mizana sy ny isan-jato hanambatra ireo akora samihafa mba hampiasana tsara ny famokarana metana amin'ny teknolojia efa napetraka.
Miaraka amin'ity fampahalalana ity, ny zavamaniry biogas indostrialy ary na ny toeram-piompiana tsy miankina miaraka aminy aza biodigesters Izy ireo dia afaka mampitombo ny famokarana amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo akora tsotra.
Tsy kisendrasendra ny fampiasana azy purine toy ny akora ho an'ny famokarana angovo satria ireo residuola biolojika ireo dia tsy misy fampiasana firy ho zezika ka misy mihoatra an'io singa io amin'ity faritra ity. Ny hevitra dia ny hanomezana fitsaboana maharitra sy maharitra ny tontolo iainana amin'ity fako ity.
Ka ny fanjakana monisipaly sy ny fikambanana eo an-toerana hafa dia mitady fampiharana azo ampiharina hanararaotana an'ity singa ity izay manana fahaiza-manao ambany amin'ny famokarana angovo fotsiny amin'ny maha biogas azy, ka tsy ahazoana tombony.
Fa raha ampifangaroina amin'ny residur fambolena izay manatsara ny famokarana biogas ilay slurry, dia hahomby kokoa sy hahasoa kokoa izany.
Ny fitsapana marobe dia tena mbola mila tanterahina mba hananana angon-drakitra mazava kokoa momba ny fihetsiky ny fako, saingy ity fikarohana ity dia mety hahasoa tokoa amin'ny fanatsarana ny famokarana biogaz.
Mety ho fandrosoana lehibe ny fahitana ny raika tonga lafatra eo amin'ireo singa voajanahary izay miantoka taranaka biogas mahomby sy mahomby na amin'ny sehatra eo an-toerana na amin'ny indostria.
SOURCE: Energies azo havaozina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Biofuel » biogaz » Ny sisan'ny voatabia sy dipoavatra dia mampitombo ny famokarana biogas
Angie dia hoy izy:
Tafandria mandry! izay ahitako angona bebe kokoa na antontan-taratasy iray mampiseho an'io karazana fikarohana io. Misaotra anao
Mamaly an'i angie
Famantaranandro vita amin'ny hazo